हातमा त्रिशुल चिन्ह हुने व्यक्तिले जानीराख्नुस् तपाईका जिवनमा केके हुन्छन् – Medianp
हातमा त्रिशुल चिन्ह हुने व्यक्तिले जानीराख्नुस् तपाईका जिवनमा केके हुन्छन्
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २६, २०७५११:४०0
एजेन्सी। हस्तकाल एउटा अद्भूत कला हो । हातको रेखा हेरेर भविष्यवाणी गर्नु सामान्य भने होइन । मानिसको हातमा कैयौँ रेखाहरु हुन्छन् । जसलाई ज्योतिसविद्याको माध्यमबाट रेखा हातको रेखाहरु हेरेर भविष्यवाणी गरिन्छ ।
मानिसको हातमा विभिन्न रेखाहरु हुन्छन् । जसले विवाह घर व्यवहार जन्म मृत्यु हस्त रेखामा उल्लेख भएका हुन्छन् । तर एउटा यस्तो चिन्ह जो हजारौँ मानिसमा एक जनाको हातमा तस्तो चिन्ह हुन्छ । त्यस्तो चिन्ह हो त्रिशुल ।
आज तपाईलाई हातको कुन भागमा त्रिशुल भएका मानिसको भाग्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारे जानकारी दिँदैछौ । हातको गुरु पर्वत नजिक त्रिशुल चिन्ह छ भने त्यस्ता मानिस जिवनमा धेरै सफल हुन्छन् । चिन्ह चेरी औँला र गुरु पर्वतमा बनेको हुन्छ।
यदि त्रिशुलका चिन्ह बुध पर्वतमा छ भने त्यस्तो व्यक्ति धेरै भाग्यमानी हुन्छ। र निकै तिक्ष्ण दिमाग भएको पनि हुन्छ। बुध पर्वत कान्छी औंलाको तल बनेको हुन्छ। यदि त्रिशुलको चिन्ह बुढी औंलाको निकै तल अर्थात शुक्र पर्वतमा बनेको छ भने त्यस्ता व्यक्ति निकै इमान्दार र आफ्नो काममा निपूर्ण हुन्छन्।
यस्ता व्यक्तिलाई भगवान शिवको विशेष कृपा हुन्छ। यदि त्रिशुलको आकृति मंगल पर्वतमा बनेको छ भने युवा अवस्थादेखि नै सफलता प्राप्त हुन थाल्छ। मंगल पर्वत गुरु र शुक्र पर्वतको माध्यमबाट बनेको हुन्छ।
६८ वर्षिय अभिनेता रिचर्ड गेरे दोस्रो पटक बाबु बन्दै
तातो दूधमा सख्खर मिलाएर खाँदाको चमत्कारिक फाइदा यस्ता छन्
होली विशेष : होलीमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती ! जसको कारण भोग्नुपर्नेछ विभिन्न नोक्सानी !
आफ्नो १६ वर्षकी छोरीको गम्भीर रोगले यस्तो हालत बनाएपछि आमाले गरिन् यस्तो प्रार्थना
छोरीलाई बिहेको लागी आमाले किनिदिइन सेण्डिल , आमाको मृत्युको २ वर्षपछि भेटिन् सेण्डिल पछाडी यस्तो रहस्य
होलीमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम